Ny tadin'ny taolan-damosina dia noforonin'i Silvery Dragon, misolo tena ny zava-bitan'ny R&D mandroso any Shina; miasa any Sina izy io ary manokana an'izao tontolo izao. Ny vokatra dia mampiavaka ny taolan-tehezana 3 ka hatramin'ny 6 amin'ny alàlan'ny sary malemy eo ambonin'ny tariby, mampitombo ny fahafaha-mamatotra amin'ny beton, noho izany manatsara ny fahombiazan'ny vokatra vita amin'ny beton efa voadinika ary mampitombo ny fiainana serivisy. Silvery Dragon dia mitazona ny haitao avo lenta an'ny sary mihetsiketsika fanamiana, fanamaivanana ny fihenjanana anaty ary fanoherana ny harafesina izay mahafeno an'i Alemana, Etazonia, Frantsa ary ireo fepetra iraisam-pirenena miady amin'ny harafesina.
Ny tadin'ny taolan-damosina dia vokarin'ny tsora-tariby karbaona voafantina avo lenta ary nohodiovin'ny fitsaboana amin'ny fomba henjana, sary imbetsaka ary fanamafisana ny tsipika famokarana mandeha ho azy. Ny vokatra dia manomboka amin'ny φ3.8 ka hatramin'ny 12.0mm amin'ny famaritana isan-karazany sy ny haavon'ny tanjaky ny safidin'ny mpanjifa. Izy io dia mety indrindra amin'ny famokarana torimaso mandeha amin'ny lalamby, tsato-kazo elektrika, tabilao mitafo, vatan-kazo sns.
Rehefa nampidirina tamin'ny tsena iraisam-pirenena voalohany ny tariby tadin-taolana, tsy nisy famaritana an'io karazana tariby io teo amin'ireo fenitra iraisampirenena. Raha ny mahazatra, ny pitsopitsony ara-teknika momba ny tanjaka mampatanjaka, ny tanjaky ny vokatra, ny harafesina, ny fialan-tsasatra nohamafisin'ny fenitra eken'ny mpanjifa; ary ny endrika ambonin'ny tariby dia voamarina amin'ny fenitra sinoa GB / T5223. Ankehitriny dia mihamaro hatrany ny mpanjifa vahiny mandray mivantana GB / T5223.
Manana ekipa mahay sy mahomby izahay izao hanomezana tolotra tsara kalitao ho an'ny mpanjifanay. Matetika izahay dia manaraka ny foto-kevitry ny mpanjifa mifantoka amin'ny antsipiriany ho an'ny mpamatsy OEM / ODM China Swrh77b Helical Ribs High Tensile PC Wire, ny vokatra sy ny vahaolana rehetra dia tonga miaraka amina serivisy manam-pahaizana avo lenta sy mahafinaritra aorian'ny fivarotana. Miorina amin'ny tsena sy mifantoka amin'ny mpanjifa no efa narahintsika avy hatrany. Miandrandra am-pahatsorana ny fiaraha-miasa Win-Win!
OEM / ODM mpamatsy China Steel Wire, PC Wire, "Mamorona soatoavina, manompo ny mpanjifa!" no tanjona kendrentsika. Manantena mafy izahay fa ny mpanjifa rehetra dia hanangana fiaraha-miasa maharitra sy mahasoa miaraka amintsika.
Masontsivana manan-danja sy fenitra fanovozan-kevitra
Bika Aman 'endrika Dia nominal. (Mm) Tensile Strength (MPa) Fitsaharana (1000h) Fenitra
Taolan-tehezana 3.8, 4.0, 5.0, 6.0, 6.25, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 9.4, 9.5, 10.0, 10.5, 12.0 1470,1570,1670,1770,1860 Fitsaharana ara-dalàna≤8%
Fitsaharana ambany≤2.5% GB / T5223, BS5896, JISG3536, EN10138
Teo aloha: PC Indered Wire
Manaraka: Plain Round & PCCP Wire
Pc Indient Wire